Ku-biirista Birta Teknolojiyada Nidaamka Brazing iyo Alxanka
Waxaa jira habab dhowr ah oo loo heli karo ku biirista biraha, oo ay ku jiraan alxanka, xayiraadda iyo dhejinta. Waa maxay farqiga u dhexeeya alxanka iyo xayiraadda? Waa maxay farqiga u dhexeeya xayiraadda iyo dhejinta? Aynu baarno kala soocida oo lagu daro faa'iidooyinka isbarbardhiga iyo sidoo kale codsiyada guud. Doodaani waxay sii qoto dheereyn doontaa fahankaaga ku biirista birta waxayna kaa caawin doontaa inaad aqoonsato habka ugu fiican ee dalabkaaga.
SIDEE NAXDINTA U SHAQAYSAA
A wadajirka ah waxaa loo sameeyaa qaab gebi ahaanba ka duwan isku-xidhka alxanka. Farqiga ugu weyn ee ugu horreeya waa heerkulka - indha sarcaadku ma dhalaaliyo biraha aasaasiga ah. Tani waxay ka dhigan tahay in heerkulka qaboojintu uu si hoose uga hooseeyo dhibcaha dhalaalaya ee biraha aasaasiga ah. Heerkulka goosgoosku sidoo kale aad ayuu uga hooseeyaa heerkulka alxanka isla birta aasaasiga ah, iyadoo la isticmaalayo tamar ka yar.
Haddii indha sarcaadku uusan isku darsamin biraha aasaasiga ah, sidee ugu biiriyaa iyaga? Waxay ku shaqeysaa iyada oo la abuurayo xirmo bir ah oo u dhexeeya birta buuxinta iyo dusha sare ee labada biraha ee la isku daray. Mabda 'kaas oo biraha wax lagu buuxiyo lagu dhajiyay wadajirka si loo abuuro dammaanadani waa ficil madax-bannaan. Hawlgallada foojignaanta, waxaad si ballaaran kuleylka ugu dhejineysaa biraha aasaasiga ah. Birta buuxinta ka dib ayaa lala soo xiriirayaa qaybaha kululaaday. Isla markiiba waa lagu dhalaaliyaa kuleylka ku jira biraha aasaasiga ah waxaana lagu dhajiyaa ficil-celin gabi ahaanba gebi ahaan wadajirka. Sidan ayaa loo sameeyaa isku-xir xiraha.
Codsiyada Brazing waxaa ka mid ah korantada / korontada, aerospace, baabuurta, HVAC / R, dhismaha iyo waxyaabo kale oo badan. Tusaalayaashu waxay u dhexeeyaan nidaamyada qaboojiyaha ee baabuurta illaa hareeraha marawaxadaha diyaaradaha ee aadka u xasaasiga ah illaa qaybaha dayax gacmeedyada ilaa dahabka wanaagsan. Brazing waxay siisaa faa iido weyn barnaamijyada ubaahan ku biirista biraha kala duwan ee aasaasiga ah, oo ay ku jiraan naxaasta iyo birta iyo sidoo kale biraha aan caadiga ahayn sida tungsten carbide, alumina, graphite iyo dheeman.
Faa'iidooyinka isbarbardhiga. Marka hore, isku-laabashada kala-goysku waa wadajir adag. Isku-xidhka isku-xidhan ee si fiican loo sameeyey (sida isku-xidhka alxanka leh) xaalado badan wuxuu ka xoog badnaan doonaa ama ka xoog badnaan doonaa biraha la isku daray. Marka labaad, isku-dhafka waxaa lagu sameeyaa heer-kul hoose oo hooseeya, oo u dhexeeya qiyaastii 1150 ° F illaa 1600 ° F (620 ° C ilaa 870 ° C).
Tan ugu muhiimsan, biraha aasaasiga ah weligood lama dhalaalin. Maaddaama biraha aasaasiga ah aan la dhalaalin, waxay caadi ahaan hayn karaan inta badan guryaha jirkooda. Daacadnimada biraha aasaasiga ah waa astaamaha dhammaan kala-goysyada brazed, oo ay ku jiraan labada qaybood ee dhuuban iyo kuwa qaro weyn. Sidoo kale, kuleylka hoose wuxuu yareeyaa halista dhalanrog birta ah ama warping. Tixgeli sidoo kale, in heerkulka hoose u baahan yahay kuleyl yar - waa arrin muhiim u ah kharash-badbaadin.
Faa'iidada kale ee muhiimka ah ee indha sarcaadku waa fudeyd ka mid noqoshada biraha isku midka ah iyadoo la adeegsanayo qulqulka ama isku-darka / dahaarka leh. Haddii aadan u baahnayn inaad dhalaasho biraha aasaasiga ah si aad ugu biirto, macno malahan haddii ay leeyihiin dhibco kala duwan oo dhalaalaya. Waad u xajin kartaa birta naxaasta sida ugu fudud birta birta. Alxamida waa sheeko ka duwan maxaa yeelay waa inaad dhalaalisaa biraha aasaasiga ah si aad u walaaqdid. Taas macnaheedu waxa weeye haddii aad isku daydo inaad alxamid naxaas (barta dhalaalida 1981 ° F / 1083 ° C) illaa birta (barta dhalaalida 2500 ° F / 1370 ° C), waa inaad shaqaalaysiisaa farsamooyin alxanka oo casri ah oo qaali ah. Wadarta sahlanaanta ku biirista biraha isku midka ah iyada oo loo marayo habraacyada caadiga ah ee brazing waxay ka dhigan tahay inaad dooran karto wixii bir ah ee ku habboon shaqada golaha, adoo ogaanaya inaadan dhibaato ku qabin inaad ku biirto iyadoon loo eegin sida ay ugu kala duwan yihiin heerkulka dhalaalaya.
Sidoo kale, a wadajirka ah wuxuu leeyahay muuqaal siman oo wanaagsan. Waxaa jira isbarbardhig habeyn iyo maalin ah oo udhaxeeya yar, nadiif fillet ee wadajirka a brazed iyo qaro weyn, kuusha aan caadiga ahayn ee wadajirka ah. Sifadaani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay kala-goysyada alaabada macaamiisha, halka muuqaalka uu muhiim u yahay. Isku-darka kala-goysyada ayaa had iyo jeer loo isticmaali karaa "sida ay tahay," iyada oo aan loo baahnayn wax hawlgal dhammayn ah - kharash kale oo kayd ah.
Brazing wuxuu siiyaa faa'iido kale oo muhiim ah alxanka taas oo hawlwadeenada ay badiyaa ku heli karaan xirfado xirashada ka dheereeya xirfadaha alxanka. Sababta ayaa ku jirta farqiga u dhexeeya labada geeddi-socod. Wadajirka toosan ee alxanka leh waa in lagu raadiyaa isku dheelitirnaan sax ah ee kuleylka iyo dhigaalka biraha buuxiya. Isku-laabashada kala-goysyada, dhinaca kale, waxay u eg tahay inay "iskeed isu sameyso" iyada oo loo marayo ficil-celin. Xaqiiqdii, qayb aad u tiro badan oo ka mid ah xirfadda ku lug leh xoqidda ayaa ku qotonta qaabeynta iyo injineernimada wadajirka. Xawaaraha isbarbardhiga ee tababarka xirfadleyda xirfad sare leh ayaa ah cunsur muhiim ah.
Ugu dambeyntii, biraha brazing way fududahay in la otomatigyeeyo. Astaamaha geedi socodka baqashada - codsiyada kuleylka ballaaran iyo sahlanaanta meeleynta birta - waxay gacan ka geysaneysaa baabi'inta suurtagalnimada dhibaatooyinka. Waxaa jira siyaabo fara badan oo kululaynta wadajirka si otomaatig ah, qaabab badan oo bir bir buuxiyo iyo siyaabo badan oo loo dhigo si hawlgallada curyaaminta ay si fudud otomaatig ugu ahaato heer kasta oo wax soo saar ah.
SIDEE SALAXDA SHAQADA
Alxanka wuxuu ku biiraa biraha isaga oo dhalaalaya iskuna walaaqaya, caadi ahaan marka lagu daro biraha lagu buuxiyo alxanka. Kala-goysyada la soo saaray way xoog badan yihiin - badiyaa waxay u xoog badan yihiin biraha ku soo biiray, ama xitaa ka sii xoog badan. Si aad u dhexgeliso biraha, waxaad si toos ah ugu dhejineysaa kuleylka isku dhafan aagga wadajirka ah. Kuleylkani waa inuu ahaadaa heerkul sare si uu u dhalaaliyo biraha aasaasiga ah (biraha la isku daray) iyo biraha filinka. Sidaa darteed, heerkulka alxanka wuxuu ka bilaabmaa barta dhalaalka ee biraha aasaasiga ah.
Alxamida guud ahaan waxay ku habboon tahay ku biirista goleyaasha waaweyn halkaasoo labada qaybood ee birtu ay aad u dhumuc weyn yihiin (0.5 ”/12.7mm) kuna soo biireen hal dhibic. Maaddaama kuusha isku-xidhka alxanka ahi aanu caadi ahayn, caadi ahaan looma isticmaalo alaabooyinka u baahan kala-goysyada qurxinta. Codsiyada waxaa ka mid ah gaadiidka, dhismaha, wax soo saarka iyo dayactirka dukaamada. Tusaalooyinka waa shirar robot lagu daray been abuurida maraakiibta cadaadiska, buundooyinka, dhismayaasha dhismaha, diyaaradaha, tababarayaasha tareenka iyo jidadka, dhuumaha iyo waxyaabo kale oo badan.
Faa'iidooyinka isbarbardhiga. Sababtoo ah kuleylka alxamiddu waa mid daran, caadi ahaan waa mid ku habboon oo tilmaamaya; Ficil ma ahan in si isku mid ah loogu dabaqo dhul ballaaran. Dhinacan tilmaamaya wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ku biirto laba xarig oo bir ah oo hal dhibic ah, habka alxanka caabbinta iska caabbinta waa wax ku ool. Tani waa hab dhakhso leh, qaab dhaqaale oo lagu sameeyo isku-xirmo adag oo joogto ah boqollaal iyo kumanaan.
Haddii wadajirku uu qumman yahay halkii laga tilmaami lahaa, in kastoo, dhibaatooyin soo baxaan. Kuleylka maxalliga ah ee alxanka wuxuu noqon karaa khasaaro. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad dabada-alxamiso laba qaybood oo bir ah, waxaad ku bilaabeysaa inaad xargaha ka jarto cidhifyada qaybaha birta ah si aad ugu oggolaato qolka birta buuxinta alxanka. Kadib waad alxamaysaa, marka hore kululee hal daraf aagga wadajirka ah ilaa heerkulka dhalaalaya, ka dibna tartiib tartiib ah ugu wareeji kuleylka qadka wadajirka ah, adoo dhigaya biraha buuxinaya isugeynta kuleylka. Tani waa wax caadi ah, hawlgalka alxanka caadiga ah. Si sax ah loo sameeyay, isku-xirkan alxanka leh wuxuu ugu yaraan u xoog badan yahay biraha ku soo biiray.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira faa'iido darrooyin ku wajahan qaabkan isku dhafan ee isku dhafan. Kala-goysyada waxaa lagu sameeyaa heer-kul sarreeya - oo sarreeya oo ku filan in lagu dhalaaliyo labada biraha aasaasiga ah iyo birta buuxisa. Heer-kulkaas sare waxay sababi karaan dhibaatooyin, ay ka mid yihiin dhalanrog suurogal ah iyo kala-goynta biraha aasaasiga ah ama culeys xagga hareeraha ah. Khatarahaani waa kuwa ugu yar marka biraha la isku xidhayaa ay qaro weyn yihiin, laakiin waxay noqon karaan dhibaatooyin marka biraha aasaasiga ahi yihiin qaybo dhuuban. Sidoo kale, heerkulka sare waa qaali, maadaama kuleylka uu tamar yahay tamarna kharash ku baxo. Inta badan kuleylka aad u baahan tahay si aad u sameysid kala-goysyada, ayaa sii kordhaya qiimaha wadajirka ah si loo soo saaro.
Hadda, tixgeli habka alxanka otomaatiga ah. Maxaa dhacaya markaad ka mid noqon weydo hal shir, laakiin boqolaal ama kumanaan shirar? Alxanka, dabeecad ahaan, wuxuu soo bandhigayaa dhibaatooyin xagga otomaatiga ah. Isku-darka iskudhafka-alxanka ee lagu sameeyay hal dhibic waa mid fudud oo otomaatig ah. Si kastaba ha noqotee, mar haddii barta ay noqoto xariijin - isku dheelitir toosan - mar kale, khadka waa in la raad raaco. Way suurtagal tahay in la otomatikada hawlgalkan baafinta, iyadoo la dhaqaajinayo khadka wadajirka ah, tusaale ahaan, la soo dhaafay saldhigga kuleylka iyo quudinta siligga filinka si otomaatig ah laga soo buuxsamo. Tani waa qaab dhismeed adag oo dhab ah, in kastoo, la damaanad qaaday kaliya marka aad leedahay waxsoosaar ballaadhan oo qaybo isku mid ah.
Maskaxda ku hay in farsamooyinka alxanka ay had iyo jeer horumariyaan. Waad kuxiran kartaa salka wax soo saarka adoo adeegsanaya dogob elektaroonig ah, dheecaan kaabsal, khilaaf iyo habab kale. Nidaamyadan casriga ahi waxay badanaa u yeeraan qalab khaas ah oo qaali ah oo lagu daro isku-darka, waqti-qaadashada. Tixgeli haddii ay wax ku ool u yihiin wax soo saarka gaagaaban, isbeddelka qaabeynta isku imaatinka ama shuruudaha ku biirista birta maalinlaha ah.
Doorashada Habka Ku Biirista Birta ee Saxda ah
Haddii aad u baahan tahay kala-goysyo ah kuwo joogto ah oo xoog leh, waxaad u maleyneysaa inaad yareyn doonto birtaada ku biirista tixgelinta alxanka iyo ka soo horjeedka adkeysi. Alxanka iyo xayiraadda labaduba waxay isticmaalaan kuleylka iyo biraha wax buuxiyo. Labadaba waxaa lagu sameyn karaa iyada oo ku saleysan wax soo saar. Si kastaba ha noqotee, isu ekaanta ayaa halkaas ku eg. Waxay u shaqeeyaan si ka duwan, markaa xusuusnow tixgelintaan iyo tixgelinta alxanka:
Dhumucdiisuna waxay ka mid ah qaybaha biraha salka
Bar ama shuruudaha wadajirka khadka
Biraha lagu biiriyo
Tirada shirka kama dambeysta ah ayaa loo baahan yahay
Ikhtiyaarrada kale? Kalagoysyada si farsamaysan looxidhay (dunta, dhejisan ama laqadaray) guud ahaan isbarbar dhiga isku-xidhka kala-goynta ee xoogga, iska caabbinta naxdinta iyo gariirka, ama qulqulka qulqulka Isku-xidhka dhejiska iyo dhejinta ayaa bixin doona dammaanad joogto ah, laakiin guud ahaan, midkoodna ma bixin karo xoogga isku-xirnaanta - u-dhiganta ama ka weyn tan biraha lafteeda. Sidoo kale iyagu, sharci ahaan, ma soo saari karaan kalagoysyo bixiya iska caabbinta heerkulka ka sarreeya 200 ° F (93 ° C). Markaad ubaahantahay isku xirnaansho bir-ilaa-bir ah oo joogto ah, xoojintu waa tartan adag.
Categories Technologies Tags adkeysi, wadajirka, sida buunshadu u shaqeyso, sida alxanka u shaqeeyo, birta xarigga birta, birta isku xidhka induction, isugeynta brazing, alxanka ku biirista, biraha brazing, biraha kululeeyaha biraha, birta indha indheynta, alxanka birta, kululeeyaha alxanka birta, alxanka Post navigation